Shwe Pa Yit
ခရိုနီတွေ ဟာ..သစ်နဲ့ မြက်ကို...မှားပြီးရိတ်နေသလိုပဲ..။
လူနှစ်ဘက်သစ်ပင်တောင် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မရှိတော့ဘူး..။
၂၅ နှစ်အတွင်း သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှု ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ
အမှတ်ယူ ဂုဏ်တက်နေချိန်မှာ..... တို့ပြည်သူအများစုဟာ...
မိုးကုတ်ပတ္တမြားဆိုတာ ...ခိုသွေးရောင် မှန်း မသိကြတော့ဘူး..။
စက်ယန္တယားကြီးမျိုးစုံနဲ့ တစ်မြို့လုံး ဖွာစုတ်နေအောင်
မွစာတက်နေအောင် တူးဆွနေတာတောင်....လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၃၀ ကျော်က
တို့နိုင်ငံသားတွေဟာ.. ရေစက်နဲ့တူတဲ့ ကျောက်စိမ်းအရည်ကောင်းကို
တရုတ်အတွက် ဂက်စ် ပိုက်လိုင်းဘယ်လိုပြီးသွားမှန်းမသိဘူး..
အဖိုးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ တရုတ်ပြည်ကို တောက်လျောက်ပို့နေပြီ..
ဒီပိုက်လိုင်းက ဖြတ်သွားရတာကိုက ရင်နာစရာ..။
တရုတ်က အဆပေါင်းများစွာ ဈေးတင်ပြီး ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ကိုဖြန့်တယ်..
မြန်မာပြည်က လမ်းတွေမှာ မမြင်ရတဲ့...
စာချုပ်တွေက...နှစ် ၃၀ ချုပ်ကြတယ်...
လက်ရှိစာရင်းအရ..သတို့သမီး သန်း (၂၀၀) တောင် လိုအပ်နေတဲ့..
— with ငရဲ သား and 20 others.
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 2:01 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စိန့်မာတင်ကျွန်း ဆိုတာ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ မပါရင် မဖြစ်တဲ့ ရှင်မဖြူ ကျွန်းပါပဲ
by MrMaung KoThet on Thursday, March 15, 2012 at 8:55pm · တရားခံက ဘယ်သူလဲ - ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိလဲ - ဘယ်သူတွေက တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးကြမှာလဲ...
အသက် ၆၂ နှစ် အရွယ်ရှိ အဆိုတော် နှင့် ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် သုမောင် သည် ၆ - ၅ - ၂၀၁၀ (တနင်္လာ)နေ့ ည ( ၉း၀၀ ) နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ သုခကမ...
“ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေး အချိန် တစ်နှစ်ခွဲ လိုသလား ”
စည်သူအောင်မြင့် The ladies ဂျာနယ်၊ မွန်းတည့်နေ ဂျာနယ်။ ၁၅-၃-၁၄။ အခုရက်ပိုင်း ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ပေးဖို့ ပြည်သူတွေရဲ့ တောင်းဆို ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဆ...
မင်းခစား ကမ်းနားသစ်ပင်တဲ့။ မတည်မြဲခြင်းတွေ၊ လျှောကျပျက်သုန်းခြင်း
Myo Set 49 minutes ago · `ဒီလူတွေ အသက်ပေးရဲတာလဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့။ ရယ်ရတယ်´ ဒီကွန်မန့်ကို ပို့စ်တစ်ခုအောက်မှာ တွေ့မိတယ်။ သူလှောင်ထားတာက ဆန္ဒပြ ပြည်...